mujeer ဇန္နဝါရီလ 7, 20180မှတ်ချက်များ
မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေ! Today I am Glad to write an article on How to ChooseaGood Way Of Hosting because my friends finding the ways of getting the good of hosting place, whose place provide us the most popular products, we can say that, Hosting Place that likely and protect our website and give us https secure of your website. How to ChooseaGood Way Of Hosting I am using the Web Host, Web Host is the world wild of hosting place, you must take this hosting place for your website, ဒီနေ့ခေတ်, က်ဘ်ဆိုက် ဆက်ဖတ်ရန် [...]
သတင်း, WordPress ကိုပိုမို
mujeer ဒီဇင်ဘာလ 31, 20170မှတ်ချက်များ
Happy New Year From WikiWon WikiWon Glad the Share all of your Happy New Year, 2018. Congratulate, You may share this link with your friends and wish them and your family, The happy new year 2017 gif video, happy new year animated wallpaper, happy new year animated gif, the happy new year 2018 gif download, ဆက်ဖတ်ရန်:3Best Reasons to buy iPhone 8 Plus happy new year gif for WhatsApp, the happy new year 2018 gif video, happy new year movie ဆက်ဖတ်ရန် [...]
တင့်တယ် Widget လေးစတိုင်က iPhone (အိုင်ပက်) အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး
mujeer နိုဝင်ဘာလ 10, 20170မှတ်ချက်များ
widget စတိုင်ဘာတစ်ခုမှငါ၏အ iPhone ပေါ်မှာအသုံးပြုမှုပေမယ့်ထားတဲ့ app ကိုငါကိုသုံးပါသင့်တယ်? ငါယခုငါသည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေချင်ပါတယ်ကိုအကောင်းဆုံးစတိုင်ပေးသူတွေကိုသူတစ်ဦးဦးကိုသုံးနိုင်သည်. iPhone ကိုအတွက် widget စတိုင်. ဒီ app ကိုသင်ပိုကောင်းအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရာသီဥတုအရင်းအမြစ်နှင့်သင်၏တစ်နေ့တာစီစဉ်ကူညီပေးသည်. ထို့အပွငျ, ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအလှဆုံးရာသီဥတု widget ဖြစ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုနိုင်အောင်အံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှုစေမည်ဖြစ်သော. iPhone ကိုတင့်တယ် Widget လေးစတိုင် (အိုင်ပက်) အဆိုပါစတိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၌ကောင်းလှ၏, အဘယ်ကြောင့်လူပေါင်းစတိုင်ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး? ကံမကောင်းသဖြင့်, တစ်ဦးကစတိုင်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏. ဒါပေမဲ့ ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Android App များ, ငွေရယူနိုင်သော, သတင်း
Bitcoin Debit Card ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ (CRYPTOPAY)
အောက်တိုဘာလ 25, 20170မှတ်ချက်များ
ဒီကယ့်ကိုတစ်ဦး Bitcoin ဒက်ဘစ်ကဒ်တည်ရှိခြင်းနှင့်ကိုယ်ရှင်းလင်းစွာဖြေနိုင်လျှင်ကျွန်တော်တို့အတော်များများအံ့သြ. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Bitcoin ဒက်ဘစ်ကဒ်ရဖို့ကဘာလဲဆိုတာလျှင်ဒီတော့သင်ဤ site ကိုမှာမှတျပုံတငျဖို့လိုအပ်: CRYPTOPAY. မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဈသင်သည်ငါ၏အကူအညီမပါဘဲလုပျနိုငျကိုသိရအလွန်ရိုးရှင်းပြီး. အကောင့်4Currency Once you joined cryptopay you will see in your account4သင့်ဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာငွေကြေးအကောင့်. Bitcoin account Euro account British pound account US Dollar account Below this4currency accounts you ဆက်ဖတ်ရန် [...]
ငွေရယူနိုင်သော, အသားပေး, နောက်ထပ်, သတင်း
ဘယ်လိုအရေးကြီးလှသည်ခေါင်းစဉ် heading SEO ဆိုသည်မှာများအတွက်?
အောက်တိုဘာလ 24, 20170မှတ်ချက်များ
tags များဦးတည်ဖန်ဆင်းခြင်းတည်၏အသုံးပြုသောသော tags များဖြစ်ပါသည်. အရေးအပါဆုံး tag ကိုဖြစ်ပါတယ် <h1> ထိုနောကျမှကဲ့သို့သောအဆင့်ဆင့်ကိုဆင်းသွားတယ် <h2>,<h3> သို့ <h6>. ကျနော်တို့ကဒီ post ကိုရေးဖို့ခံရဖို့လိုအပ်. ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေနှင့်အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးရှိစေနှင့်သူတို့အရေးပါမှု. အချိန်ကာလအသုံးပြုသူအများစုဟာအမှန်တကယ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ် setup ကိုဦးတည်ပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံမသိခဲ့ပါ. ဒီတော့နည်းလမ်းနှစ်ခုကဒီ tags များသင့်ရဲ့ website မှာတညျဆောကျပုံနိုငျပုံကိုလည်းမရှိ. ဂန္ထဝင် HTML ကိုဖွင့်တဦးတည်းရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ် <h1> tag ကို ဆက်ဖတ်ရန် [...]
နောက်ထပ်, သတင်း, SEO ဆိုသည်မှာ
mujeer အောက်တိုဘာလ 4, 20170မှတ်ချက်များ
ကွဲပြားခြားနားသောမိုဘိုင်းဖုန်းများသူတို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသူတို့၏ထူးခြားသောကို USB Driver များကိုရှိတယ်. ဤအက USB Driver များကိုသာမရှိရင်သင်ကသင်တစ်ဦးကွန်နက်ရှင်ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် PC ကိုအတွက်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက် USB ဒရိုင်ဗာကို install လုပ်ဖို့ သာ. ကောငျးသညျဟုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကြောင်းကိုသင်၏ P.C နှင့်အတူသင့်မိုဘိုင်းမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်. ဒီအထူးဆောင်းပါးမှာတော့, thry 32-bit နဲ့ပေါ်လျှင်သင်တို့ကိုငါမခွဲခြားဘဲပြတင်းပေါက်အသုံးပြုသူများအတွက် HTC ကကို USB driver ကိုဝေမျှဖို့အလွန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့လမ်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်, 64-နည်းနည်းပြတင်းပေါက်. HTC ကကို USB Driver 32-bit / 64-bit ကို Download လုပ်ပြီး Install ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Android App များ, သတင်း